Yiziphi izindlela ezinamandla zokwakha ama-backlink aphezulu e-PageRank?
Bonke abantu abathinteka ngokuqondile ekusebenziseni iwebhusayithi nokumaketha kwedijithali bayazi ukuthi yiziphi izixhumanisi zangasese nokuthi bangayithuthukisa kanjani i-website SEO futhi bakhulise isikhundla se-domain ku-SERP. Noma kunjalo, akuwona wonke ama-backlink abaluleke kakhulu njengekhwalithi eyodwa kusuka kumasayithi aphezulu e-PageRank.
Yini ephezulu ye-PageRank backlink?
I-Link Building ibhekisela enkambeni lapho ufaka isayithi lakho noma isixhumanisi sebhulogi kwenye indawo kuwebhusayithi uma ucabanga ukuthi lesi sixhumanisi siwusizo kubafundi bakho abahlala njalo kanye nezivakashi zewebhu zangasese. I-backlink ephezulu ye-PageRank iyisixhumanisi sangaphandle esivela kwiwebhusayithi egunyaziwe eqhutshwa phambili yi-Google bots. Kuthiwani uma ufaka isayithi lakho noma isixhumanisi sebhulogi komunye umthombo wewebhu we-niche uma ubheka i-Google Page Rank ne-Domain Authority - uued talverehvid soodsalt. Ezinsukwini zethu, kuthiwa yi-backlink ephakeme kakhulu.
Ngaphansi komkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho, udinga ukuthola amawebhusayithi ahlobene niche afaka emigomo efanayo yokusesha njengesizinda sakho kanye nokuthunyelwa kwesithangami, ukubhuloza izivakashi noma imiphakathi ephezulu yokubhuloga ukuze uthole ngaphezulu Izixhumanisi ze-PageRank kuya kusayithi lakho.
Esigabeni esilandelayo, udinga ukuhlola wonke amamethrikhi abalulekile wesayithi noma ibhulogi ongathanda ukuthola izixhumanisi kusuka. Ungathola ama-software amaningi namathuluzi e-intanethi kuwebhu evumela ukuthi uhlole amamethrikhi wesayithi mahhala. Kodwa-ke, akubona bonke abaphezulu bekhwalithi. Ngincoma ukuba usebenzise iSemalt Web Analyzer, i-MozRank, ne-Google Pagerank. Lawa mathuluzi wamahhala we-inthanethi azokusiza ukuhlola igunya lewebhu kanye ne-PageRank.
Izindlela zokuthola amawebhusayithi ahlobene namagama angukhiye
Ukuphawula ngebhulogi kungenye yezindlela ezilula futhi ezinamandla kakhulu ukwakha izixhumanisi eziphezulu zangaphandle kusayithi lakho noma ibhulogi. Kungadlulisa inqwaba yezimoto ezibhekiswe kusayithi lakho mahhala. Konke okudingayo ukuthola umthombo wewebhu ohambisana nabo embonini nemakethe yakho yemakethe. Ukuze ubone amawebhusayithi wokubeka amazwana ebhulogi, udinga ukufaka imibuzo elandelayo ebhokisini lokusesha le-Google: "igama lakho elingukhiye inurl:. com, "" isayithi lakho elingukhiye "isayithi:. edu inurl: ibhulogi "thumela amazwana," "isayithi lakho elingukhiye" isayithi:. gov inurl: ibhulogi "thumela amazwana.
Enye yezindlela ezithandwa kakhulu nezendabuko ukwakha ama-backlink aphezulu e-PageRank ukubhalisa kwabavakashi. Udinga ukuthola ibhulogi ehlobene nesihloko sakho sokuqukethwe bese ubuza mayelana nokushicilela isihloko sakho lapho. Uma umthombo owakhethile uthola ukuthi okuqukethwe kwakho kuwusizo, bazokhipha ishicilelo, futhi uthole ijusi yokuxhumanisa lekhwalithi futhi uthole ithuba lokuthuthukisa ukuqwashisa kwe-brand yakho. Ukuthola amasayithi wokubhuloza izihambeli, ungasesha i-Google yale mibuzo elandelayo: "igama lakho elingukhiye" umlobi womvakashi, "igama lakho elingukhiye" umlobi wokubhala webhulogi yezivakashi, "igama lakho elingukhiye" engeza i-athikili noma "igama lakho elingukhiye" balethe isihloko.
l ukutshela ukuthi ungakha kanjani izixhumanisi ze-PageRank eziphezulu zebhulogi yakho noma isayithi bese ufika ku-TOP emiphumeleni yosesho. Ngakho-ke, uma ufuna ukwandisa ibhulogi yakho noma igunya lesayithi, lolu lwazi luzowusizo kuwe.